အတ္တရံမြစ်ကူး(စံပယ်ကူး)တံတား၊ ပင်မတံတား သံဘောင်တပ်ဆင်မည့် အချိန်တွင် ရေလမ်းကြောင်းပိတ်ထားမည်ဖြစ်ကြောင်း ရေလမ်းသတင်း သတိပေးချက
၁။ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ တံတားဦးစီးဌာန၊ တံတားအထူးအဖွဲ့ (၁၄) မှ မွန်ပြည်နယ်၊ ကျိုက်မရောမြို့နယ်၊ ကျိုက်မရော-စံပယ်ဂူ-ကော့ပနော လမ်းပေါ်ရှိ အတ္တရံမြစ်ကူး(စံပယ်ဂူ) တံတား အား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဆောင်ရွက်ရာတါင် RP1 နှင့် RP2 ကြားတွင် Temporary Support များ (၄) တိုင် စိုက်သွင်း၍ ပင်မတံတား သံဘောင်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တန်(၂၀၀၀) Working Barge များ z-craft များ အသုံးပြု၍ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ အတ္တရံမြစ်ကူး(စံပယ်ဂူ) တံတား၊ ပင်မတံတား သံဘောင် တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းအား အန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် (၁၅-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှ (၁၅-၆-၂၀၂၀)ရက်နေ့အထိ အတ္တရ့မြစ်ကူး(စံပယ်ဂူ)တံတား၊ စီမံကိန်းဧရိယာအတွင်း ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးများ၊ လှေသင်္ဘောများ၊ မော်တော်များ ဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းအား ကန့်သတ်ပိတ်ထားမည် ဖြစ်ကြောင်း ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန မှ ရေလမ်းသတိပေးချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ရေစူးကန့်သတ်ချက် လိုက်နာကြရန် ရေလမ်းသတိပေးနှိုးဆော်ချက်
၁။ ပြည်တွင်းရေလမ်းများတွင် ရေယာဉ်များ လုံခြုံချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင်ရေးအတွက် နှစ်စဉ် နိုဝင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့မှ မေလ (၁၅) ရက်နေ့အတွင်း ရေနည်းကာလ သတ်မှတ်၍ ရေယာဉ်များ၏ ဝန်တင်ရေစူးကို ရေကြောင်း နယ်မြေများအလိုက် အောက်ပါအတိုင်း ကန့်သတ်ထားပါသည်-
၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖော်ပြပါ ဝန်တင်ရေစူးကန့်သတ်ချက်ကို ရေယာဉ်များလိုက်နာရန် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်း များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေလမ်းသတိပေး နှိုးဆော်ချက် ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ဧရာဝတီတံတား(ပခုက္ကူ)ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောက်နှုတ်ချက်
၁။ ဧရာဝတီတံတား(ပခုက္ကူ) ရေလမ်းတွင် ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ရေလမ်းကြောင်းကို အစုန်လမ်း အဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ် (၁၅) နှင့် (၁၆) အကြားမှ လည်းကောင်း၊ အဆန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ် (၁၄)နှင့်(၁၅) အကြားမှ လည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရေနည်းကာလသို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ် သဖြင့် ရေလမ်းကြောင်းအခြေအနေအရ ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ရေလမ်းကြောင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁) ရက်နေ့မှစ၍ အစုန်/အဆန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်အမှတ် (၁၃) နှင့် (၁၄) အကြားသို့ ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်မည ်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပြောင်းလဲမည့် ရေလမ်း၏ ကင်းလွတ်အကျယ်မှာ (၂၆၂)ပေ ရှိပြီး ကင်းလွတ်အမြင့်မှာ အမြင့်ဆုံး ရေမျက်နှာပြင် အထက် (၅၂) ပေ ရှိပါသည်။ ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းရမည့် ဝင်ပေါက်တွင် နေ့အခါ အစိမ်းရောင် တြိဂံ အမှတ်အသားပြသ၍ ညအခါ မီးစိမ်းထွန်း ပြသထားမည် ဖြစ်ပသည်။ မဝင်ရမည့် ရေလမ်းတွင် နေ့အခါ အနီရောင်ကြက်ခြေခတ် အမှတ်အသားပြသ၍ ညအခါ မီးနီထွန်း ပြသထားမည် ဖြစ်ပါ သည်။
၃။ တံတားရေလယ်တိုင်များ၏ အောက်ခြေပိုင်တိုင်အုတ်ခုံမှာ ရေလယ်တိုင်များ၏ တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် (၁၅) ပေခန့် အစွန်းထွက်နေသဖြင့် ရေယာဉ်များ ရေလယ်တိုင် (၂) ခု အကြားမှ ယှဉ်ပြိုင်ခုတ်မောင်းခြင်း မပြုကြရန်နှင့် တွဲရေယာဉ်များ တစ်တွဲချင်းသာ ချိတ်ဆွဲ ဖြတ်သန်းကြရန် အပြင် ဝင်ပေါက်သို့ ချဉ်းကပ်ရာတွင် လုံလောက်သော အကွာအဝေးမှ ချဉ်းကပ်လမ်းကြောင်းမှန်ဖြင့် ထိန်းသိမ်း ခုတ်မောင်းကြရန် ရေအရင်းအမြစ်နှင့်မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေလမ်းသတိပေး နှိုးဆော်ချက်သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
ဧရာဝတီတံတား(ထီးချိုင့်)ရေလမ်းကြောင်း ပြောင်းလဲမည်ဖြစ်ကြောင်း သတင်းကောက်နှုတ်ချက်
၁။ ဧရာဝတိ(ထီးချိုင့်) ရေလမ်းတွင် ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ရေလမ်းကြောင်းကို အစုန်/အဆန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ် (၁၅)နှင့် (၁၆) အကြားမှ ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရေများကာလသို့ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်သဖြင့် ရေလမ်းကြောင်းအခြေအနေအရ ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ရေလမ်းကြောင်းကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ အစုန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ် (၁၄)နှင့် (၁၅) အကြားသို့ လည်းကောင်း၊ ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပြောင်းလဲမည့် ရေလမ်း၏ ကင်းလွတ်အကျယ်မှာ ရေလယ်တိုင်အမှတ် (၁၄)နှင့် (၁၅) အကြားတွင် (၃၄၄)ပေရှိပြီး ရေလယ်တိုင်အမှတ် (၁၅)နှင့်(၁၆)အကြားတွင် (၂၀၀)ပေခန့်ရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကင်းလွတ်အမြင့် မှာ အမြင့်ဆုံး ရေမျက်နှာပြင်အထက် (၄၇)ပေရှိပါသည်။ ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းရမည့် ဝင်ပေါက်တွင် နေ့အခါ အစိမ်းရောင် တြိဂံအမှတ်အသားပြသ၍၊ ညအခါ မီးစိမ်းထွန်းပြသထားမည် ဖြစ်ပါသည်။ မဝင်ရမည့် ရေလမ်း တွင် နေ့အခါ အနီရောင်ကြက်ခြေခတ် အမှတ်အသားပြသ၍၊ ညအခါ မီးနီထွန်း ပြသထားမည် ဖြစ်ပါသည်။
၃။ တံတားရေလယ်တိုင်များ၏ အောက်ခြေပိုင်တိုင်အုတ်ခုံမှာ ရေလယ်တိုင်များ၏ တစ်ဘက်တစ်ချက်တွင် (၁၅) ပေခန့် အစွန်းထွက်နေသဖြင့် ရေယာဉ်များ ရေလယ်တိုင် (၂) ခု အကြားမှ ယှဉ်ပြိုင်ခုတ်မောင်းခြင်း မပြုကြ ရန်နှင့် တွဲရေယာဉ်များ တစ်တွဲချင်းသာ ချိတ်ဆွဲ ဖြတ်သန်းကြရန် အပြင် ဝင်ပေါက်သို့ ချဉ်းကပ်ရာတွင် လုံလောက်သော အကွာအဝေးမှ ချဉ်းကပ်လမ်းကြောင်းမှန်ဖြင့် ထိန်းသိမ်း ခုတ်မောင်းကြရန် ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေလမ်းသတိပေး နှိုးဆော်ချက်သတင်း ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
Sagaing bridge (Innwa) channel Notification
( 4-12-2014 )
၁။ ဧရာဝတီမြစ်ကူး စစ်ကိုင်းတံတား( အင်းဝ )ရေလမ်းတွင် ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်း သွားလာရန် ရေလမ်းကြောင်းကို အစုန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ်( ၂ ) နှင့် ( ၃ )အကြား မှလည်းကောင်း၊ အဆန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ်( ၁ )နှင့်( ၂ ) အကြားမှလည်းကောင်း ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ ရေနည်းကာလသို့ ရောက်ရှိ လာပြီဖြစ်သဖြင့် ရေလမ်းကြောင်း အခြေအနေအရ ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းသွားလာရန် ရေလမ်းကြောင်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ( ၅ ) ရက်မှစ၍ အစုန်၊ အဆန်လမ်းအဖြစ် ရေလယ်တိုင်အမှတ် ( ၂ )နှင့်( ၃ ) အကြားမှ ပြောင်းလဲ ဖွင့်လှစ်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ပြောင်းလဲမည့် ရေလမ်းကြောင်း၏ ကင်းလွတ်အကျယ်မှာ( ၃၅၀ )ပေရှိပြီး၊ ကင်းလွတ်အမြင့်မှာ အမြင့်ဆုံးရေမျက်နှာပြင်အထက်( ၃၆ )ပေရှိပါသည်။ ရေယာဉ်များ ဖြတ်သန်းရမည့် ဝင်ပေါက်တွင် နေ့အခါ အစိမ်းရောင် တြိဂံအမှတ်အသား ပြသ၍၊ ညအခါ မီးစိမ်းထွန်း ပြသထားပါမည်။ မဝင်ရမည့်ရေလမ်းတွင် နေ့အခါ အနီရောင် ကြတ်ခြေခတ် အမှတ်အသား ပြသ၍ ညအခါ မီးနီထွန်း ပြသထားပါမည်။
၃။ ရေယာဉ်များအနေဖြင့် ရေလယ်တိုင် ( ၂ )ခုအကြား မှ ယှဉ်ပြိုင်ခုတ်မောင်း ခြင်းမပြုကြရန်နှင့် တွဲရေယာဉ်များ တစ်တွဲချင်းသာ ချိတ်ဆွဲဖြတ်သန်းကြရန်ဖြစ်ပါသည်။ အစုန် ရေယာဉ်အားဦးစားပေးရန်နှင့်ဝင်ပေါက်သို့ ချဉ်းကပ်ရာတွင် လုံလောက်သော အကွာအဝေးမှ ချဉ်းကပ်လမ်းကြောင်းမှန်ဖြင့် ထိန်းသိမ်းခုတ်မောင်းကြရန် ရေလမ်း သတိပေး နှိုးဆော်ချက်သတင်း ထုတ်ပြန်ပါသည်။
Consulting Services for Improvement of Twante Canal Project
(EDCF Loan Agreement NO. MYA-11)
Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems
(Detail Design & Construction Supervision)
IMPROVEMENT OF TWANTE CANAL PROJECT
(30th December 2019, DWIR OFFICE)
Feasibility Study on Twante Canal Improvement Project
Feasibility Study of Twante Canal Improvement Project was conducted by cooperation between Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems (DWIR) of the Ministry of Transport, the Republic of the Union of Myanmar and the ISAN Corporation from the Republic of Korea. The Feasibility Study was begun in December 2013 and the final report was submitted in July 2014. The first stage of implementation of the Twante Canal Improvement Project will be carried out by the loan of Economic Development Cooperation Fund (EDCF) from the Korean Government and the project will be benefitted for local people in the region and people using the canal by providing safe navigation, smooth flow of cargos, bank protection, flood protection and development in tourism. The president office has approved the Twante Canal Improvement Project and official procedures and negotiation between Myanmar and Korea have been under processing.
The Second Joint Steering Committee Meeting Myanmar and the Netherlands and Hand Over of the Executive Summary of Myanmar IWRM Strategic Study
As the part of cooperation between Myanmar and the Netherland according to the MoU for cooperation in the field of Integrated Water Resources Management signed in May 2013, the second Joint Steering Committee (JSC) between Myanmar and Netherlands was held and Multiannual Working Plan was signed on 17th November 2014 at DWIR office in Yangon, Myanmar. Mr. Peter Heij, NL Competent Authority of the MoU, Director General of the Directorate for Spatial Development and Water Affairs, the Ministry of Infrastructure and the Environment, handed over the Executive Summary of Myanmar Integrated Water Resources Management Strategic Study “From Vision to Acction” to U Htun Lwin Oo, Myanmar Competent Authority of the MoU, Secretary of National Water Resources Committee - NWRC, Director General of the Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems, Ministry of Transport.
Element of the Working Programme identified for the cooperation between Myanmar and the Netherlands are -
1. IWRM data collection, information and modelling activities;
2. Capacity building (Universities and training facilities);
3. Knowledge transfer and advice by High Level Expert Team IWRM;
4. Strategic study on implementation of IWRM and follow-up activities in Myanmar;
5. From identification of possibilities for concrete projects “no regret” to ‘learning by doing projects’.
The 'learning by doing' projects are;
1. Integrated Meiktila Lake Area Development (Mandalay Region):improved watershed management to reduce siting up of the lake, dredging of the lake, urban and rural drinking and irrigation water supply, water quality control and pollution prevention, inter-departmental cooperation and people's participation. Cooperating agencies: a.o. MoAI, MoECaF, MoLFaRD, Meiktila Township.
2. Bagan Multi-Purpose Pilot River Beautification (Mandalay Region): river training for improved navigability, irrigation water supply, mini hydropower, river embankment beautification. Cooperating agencies: MoT/DWIR, MoAI, Bagan Township, Private Partners.
3. Pan Hlaing Control Sluice cum Navigation Lock (Yangon Region): drainage control for area of ca. 70,000 hectares, irrigation water supply, flood control, improved inland water transport facilities for industrial zone, ecological protection. Cooperating agencies: MoAi, MoT/DWIR, YCDC.
4. Feasibility Study Mandalay-Bagan navigability improvement: tendered study, assigned to Royal HaskoningDHV, Arcadis and Rebel Group on river training works for improved navigability of Ayeyarwady River. Cooperating Partners: MoT/DWIR, Netherlands Government, World Bank.
5. Bago-Sittaung Canal Integrated Water System Analysis: Operational improvement of integrated water system of dams, canals and rivers on Bago Region for improved irrigation, drainage, flood control, hydropower development and inland water transport. Cooperating agencies: Mot/DWIR, MoAI/ITC Bago, MoHD, Bago Region,etc.
A Statement of Declaration from the 23rd Aug 2014 meeting between Expert Group of the National Water Resources Committee (NWRC) and Dutch High Level Experts
A Statement of Declaration from the 23rd Aug 2014 meeting between Expert Group of the National Water Resources Committee (NWRC) and Dutch High Level Experts held at DWIR office in Yangon (Water Management in Myanmar: " From Vision to Action " ) [Download]
ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ၂၀၂၀ အခမ်းအနား ကျင်းပရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ
ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ၂၀၂၀ အခမ်းအနား ကျင်းပရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး
ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ၂၀၂၀ အခမ်းအနား ကျင်းပရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ဖိတ်ကြားခြင်း
၁။ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မတ်လ(၂၂) ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ၂၀၂၀ အခမ်း အနားကို အခြားနိုင်ငံများနည်းတူ မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း အမျိုးသားအဆင့် ရေအရင်းအမြစ် ကော်မတီမှကြီးမှူး၍ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား၊ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲများနှင့် ပြပွဲ အခမ်းအနားများ ကျင်းပရေးအတွက် ကမ္ဘာ့ ရေနေ့ ၂၀၂၀ အခမ်းအနား ကျင်းပရေး လုပ်ငန်းကော်မတီကို ဌာန အဖွဲ့အစည်းများမှ အမည်စာရင်း တောင်းခံ၍ ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။
၂။ ကမ္ဘာ့ရေနေ့ ၂၀၂၀ အခမ်းအနားကျင်းပရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ၏ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကို အောက်ပါအစီအစဉ်တိုင်း ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပါသဖြင့် မိမိတို့ဌာန အဖွဲ့အစည်းများမှ လုပ်ငန်း ကော်မတီဝင် (သို့မဟုတ်) ကိုယ်စားလှယ် (၁) ဉီး တက်ရောက် ဆွေးနွေးပေးပါရန် လေးစားစွာ ဖိတ်ကြား အပ်ပါသည်-
နေ့ရက် - ၂၇- ၁-၂၀၂၀ (တနင်္လာနေ့)
အချိန် - နေ့လယ် (၁၃:၀၀)နာရီ
နေရာ - ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဉီးစီးဌာန၊
အမှတ်၊ ၄၀၀ ၊ အောက်ပုဇွန်တောင်လမ်းမကြီး၊ ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်၊
ရန်ကုန်မြို့၊ ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်း - ၀၁-၈၂၀၁၈၅၇
Presentations For World Water Day 2017
01_Rain Water Harvesting_Dr. Khin Maung Lwin
02_Rain Water Harvesting around the World_U Kyaw Oo
03_Twan Te Canal Integrated Water Management Project_Mr. Charlie Kim
04_Water Resources for Industrial Utilization in Myanmar_Daw Tin Tin Htoo
05_GW Monitoring in Myanmar_U Thant Zin
06_Control Measurement for Sustainable Development of Groundwater Resources in Yinmarpin
07_Chindwin RBO_Dr. Win Maung_MEI
08_Water Policy in Nagoya_Ms. Yumiko
1.Water Resource Management & Disaster Risk Reduction(13-3-2017)
2.Water Utilization for Fire Fighting
3.Impact of Rapid Urbanization and Industrialization of Mandalay Environ on Ayeyarwady River
4.Navigation related with Disaster Risk Reduction
5.Flood Inundation Analysis and Flood Assessment for Nyaungdon
6.Flood Hazard and Disaster Risk Assessment in Bago River Basin (IWUMD) 13 March 2017
7.Flood Risk Management_Yumiko Asayama_Rv
8.World Water Day_MOHS
2.Learning Delta Asia Initiative
3.Pilot Testing the River Basin Management Approach in Bago Sub-basin
5.ASEAN HYDROINFORMATICS AND CLIMATE DATA CENTER (AHC)
7.Improving Water Access in the Dry Zone of Myanmar – UNDP-Adaptation Fund Project
8.Water Security in the Delta_IADS
01_Application of Istope Hydrology in GW resources management (Dr. Khin Khin Lay_MTU)
02_ Determination of Elemental concentration in Drinking Water From Various Townships (Dr. Cho Cho)
03_ Analysis of water form In Daw Gyi Lake in Moe Nyin Tsp (Dr. Khin Win)
04. National Assessment Report (U Chit Kyaw)
05_ Comparison of Hydraulic Characteristics & Channel compositon of GW In Monywa Tsp (U Zaw Myo)
06_ Capacity Building & Innovation in IWRM (Ms. Marjankreijns)
07_ Case Study of Bo Myat Tun Bridge Waterway Improvement (Ms. Eaint Mon Khaing)
08_Presentation Background for YWPs and JRs (Prof. Dr. Khin Ni Ni Thein)
1.Community Driven_Water SupplyUN-Habitat
2.World Water Day(2017)Myanmar
3.Some experiences in Desalination of water during Recovery
4.world water day 1432017 2
5.Conjunctive Use of Spate Water and River Pumping Water in Twingyi Pump Irrigation Project
Abstract of Waste water Aqua for All
Waste Water- Acqua for All
Arcadis Sustainable Cities Water Index 2017 WWD2017NPT
1.Water supply,4Clean Awareness and Community Led Total Sanitation Approach
2.ASSESSMENT OF WATER POLLUTION IN TAUNGTHAMAN LAKE
4.Nay Pyi Taw Water Supply and Water Treatment
Abstract of Urban Sanitation & Public Health
1.Monitoring for Water Quality of Dams in Central Myanmar, Daw Myint Myint Than
2.Urban Sanitation & Public Health
3.Water Pollution Control Challenges in Myanmar
4.water quality assessment (inya and kandawgyi)
5. Chindwin water quality_Eng_11032016_Clean
5.Water Quality Monitoring in the Chindwin River Basin_Capacity building, State, and Challenge
1.Non-revenue Water Management in Yangon Region_Manilar Water
2. Challenges of tunneling and Hydropower Development(DHPI)
3. Ayeyarwaddy Delta_Status and Trends based on Morpho-Sedimentary Analysis
3.Challenges on Tunneling and Hydropower Development
4.Strategic Environmental Management
1.Forest and Floods_Daw Hla Oo Nwe
4.River restoration_Murray-Darling Basin Plan
5.Mapping from space
Water Innovation of Tamu city water supply
WAY OF THINKING FOR WATER TREATMENT
1.Building capacity for inclusive governance and management of water and ecosystem services
2.Pan Hlaing River Integrated Developement Plan_world water day
3.WWD 2017_Meikhtila Lake Integrated Development Plan (MLIDP)_KLH (1)
4.TOWARDS “PEOPLE CENTRED ENERGY”
1.Sustainable Development of Agricultural Water in Korea
2.Ayeyarwaady_Murray Darling River Basin Twinning Arrangement (1)
3.Space Technology for River Basin Planning
6.Strategic Environmental Assessment(SEA) of Hydropower in Myanmar
1.Improvement of environmental and social management of hydropower project
2.Environmental Safeguard and Environmental Impact Assessment System in Myanmar
3.Presentation WaterAid Myanmar Water Security Framework March 2017
4.Modelling in River Basin Planning
5.Data for effective Water resources myanmar
1.Development of Farmer Participation in Irrigation Water Management
2. GWP STRATEGY 2014- 2019 FOR WATER AND JOB OPPOTUNITIES
2.GWP STRATEGY 2014-2019 FOR WATER AND JOB OPPOTUNITIES
4.WMs_Rain Water Harvesting Campaign_14Mar2017_v2
5.Water stewardship PPT for World Water Day NPT 14 March (session on Water Stewardship)
Presentations For World Water Day 2015
UNICEF_WWD_Sustainable Water Supply [Download]
(DHPI)World water Day PPT (20-3-2015)_UAL [Download]
DRD_Presentation for Myanmar Water day [Download]
YCDC_20.3.2015(World Water day) [Download]
World Water Day by Watershed Management Department, FD (20-3-2015) [Download]
Role of Myanmar Water Partnership [Download]
Twante Canal Integrated Management Project_final [Download]
Capacity Building [Download]
Water and Sustainable development [Download]
Sustainable Hydropower [Download]
A glance at water pollution [Download]
Stream flow simulation [Download]
If you have any comment or suggestion to us, please send through email to [email protected] Facebook Page: | Sitemap
©Copyright 2014. All Rights Reserved by Directorate of Water Resources and Improvement of River Systems
Managed by DWIR | Powered by BEAT.